Tsvaga kuti ndeupi mutambo wekushanya uye kupi kuti uzviite | Kufamba Nhau
Susana Garcia | 19/03/2021 21:09 | General, Kufarira
El mitambo kushanya yave imwe nzira yekufamba izvo zviri kuwedzera kuve zvinozivikanwa. Mhando dzekushanya dzave dzichichinja nekukasira nekuda kwekudyidzana kwenyika, kuvandudzwa kwekutaurirana uye kudzikisa mutengo wekufambisa, zvinoreva kuti nhasi tine zvikonzero zvakasiyana siyana zvekushanyira nzvimbo dzakasiyana, zvichisiyanisa nyika yekushanya zvakanyanya. Kure kune nzendo dzeboka dzakarongedzerwa kuve munzvimbo dzemahombekombe kana kuona nzvimbo dzakatarwa mumaguta.
Nhasi nyika yekushanya yakasarudzika uye yakasununguka, ipapo kuti kushanya kwemitambo kwakamuka, tsika inonakidza kwazvo uye inogona kuve kukurudzira kukuru kwekufamba. Tiri kuenda kunoona kuti ino mitambo yemitambo ine chii uye kuti tingaite sei rudzi urwu rwekushanya kana kwainogona kuwanikwa.
1 Chii chinonzi kushanya kwemitambo?
2 Mhando dzekushanya kwemitambo
3 Mhanya nhangemutange
5 Nzvimbo dzekusvetuka
6 Mitambo kushanya kwekushambira
7 Zviitiko uye kushanya kwemitambo
Chii chinonzi kushanya kwemitambo?
Mitambo yekushanya ndeye mhando yekushanya inotarisa pamitambo. Unofamba kuenda kunoona shasha kana mutambo. Zvakajairika kufamba uchiita mutambo, sekutora nzira yakati wandei yekukwira kana kuti kite kana kusefa pamahombekombe ayo anonyanya kukosha pairi. Kushanya kwemitambo kuri kuwedzera nhasi nekuti zvinodhura kutora nzendo diki pane zvaive makore apfuura. Ndokusaka kune vanhu vazhinji vanofamba kwemazuva mashoma kuti vaone mutambo kana kutamba mutambo wevaraidzo yakapusa. Iyo imwe nzira yekutarisa kufamba, yakanangana nemutambo watinofarira uye pane yekuvaraidza. Zvino nzendo dzinoenda kupfuura kuzorora, kutiza kana kushanya kwetsika.
Mhando dzekushanya kwemitambo
Mitambo yekushanya inogona kuve yemhando dzakawanda. Tinogona enda kunzvimbo yemakomo kuti usvetuke, kutora nzira yekukwira kana kuenda kumarathon muguta, nekuti kune vakawanda vanozivikanwawo. Kune rimwe divi, kune avo vanoita mutambo wezvekushanya nekuenda kune zvimwe zviitiko, kunyanya mumitambo yenhabvu, sezvinoitika kuSpain kana muEurope yese nezviitiko zvakaita seSoccer World Cup kana European Cup.
Kune nzvimbo zhinji dzatinogona kumhanya, kubva pamakiromita gumi kusvika kuhafu yemarathoni kana akazara marati. Asi mamwe emamarathoni aya, ayo mazana evanhu ari kugadzirira, ane mukurumbira chaizvo. Iyo iri muNew York ndeimwe yacho, asi kune imwewo muBoston, Paris kana Berlin. Izvi zviitiko zvakakura zvinowanzoitika munzvimbo dzakadai semaguta makuru uye chiitiko chakakura chaizvo icho chiitiko chekujoinha. Asi iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kumhanya makiromita makumi mana nemakumi mana emumakwikwi.
Kune nzvimbo uko avo vanoda kuita mitambo sevanoda sekukwira, izvo zvinoda mwero wakakosha wehunyanzvi, enda. MuSpain tine nzvimbo senge semuenzaniso iyo Naranjo de Bulnes, Iyo ine rakakura kumadziro. Dzimwe nzvimbo dzisinganzwisisike ndiGomo Asgard muCanada, mune nharaunda yechando nechando, Yosemite muUnited States, ine rusvingo rukuru rwemabwe kukwira MuPatagonia muArgentina tinowana zvakare makomo anoshamisa ayo ari maroto eanokwira.
MuSpain tine nzvimbo dzakakwirira dzeSki, saka kune yakawanda yekushanya kwechando. Semuenzaniso, isu tine zviteshi senge Baqueira Beret muLleida, ane mukurumbira uye akasarudzika, iri muMupata wakanaka weArani. Iyo ine anosvika kumakiromita zana neshanu emateki akatanhamara. Imwe ski resort iri muHuesca, Formigal, ine nharaunda huru yevechidiki. Imwe yeakakurumbira ndiyo Sierra Nevada iri muGranada, inozivikanwa kwazvo kumhuri. Kunze kweSpain kune dzimwe nzvimbo senge Chamonix muFrance, Zermatt muSwitzerland kana muPortillo, Chile.
Mitambo kushanya kwekushambira
Muitiro wemitambo yemvura wakapararira uye kune nzvimbo kwavanogona kuitirwa rinenge gore rese. MuSpain tine nzvimbo senge Mundaka pamhenderekedzo muVizcaya, Pantín gungwa muFerrol kana Razo muA Coruña, vese vari kuchamhembe. Kune mamwezve ari munzvimbo dzakaita sezvitsuwa, saEl Quemao muLanzarote. Munzvimbo yekumaodzanyemba tinowana nzvimbo senge Cádiz ine mahombekombe mazhinji kwaunogona kuita iyi mitambo yemitambo nekuda kwemamiriro avo akanaka.
Zviitiko uye kushanya kwemitambo
Kune zvimwe zviitiko zvinogara zvine mukurumbira. Fainari yemitambo mikuru yenhabvu yakadai seyeMikombe yeNyika kana maKombi zviitiko zvinoitirwa munzvimbo dzakasiyana. Kune zvakare vamwe vakaita saWimbledon kana semuenzaniso iyo Tour de France, kana tichida kuchovha bhasikoro, iyo inogona kuteverwa nenzvimbo zhinji muFrance, kana rwendo rwebhasikoro kuSpain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Mitambo yekushanya